Njalo girl amaphupho eside, izipikili amahle. Ngeshwa, ukufinyelela lo mphumela akuyona yonke - othile kakhulu mncane nail ipuleti, yingakho nail neze ezikhulayo, kodwa kwezinye abesifazane bahlale ziwohloke. Kodwa wonke umuntu ofuna ukwenza manicure enhle, okumangalisayo amaphethini eyinkimbinkimbi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuhlelwe ngaphambi migubho. Nokho, isivuno namanje - nail eqinisa nail amapuleti. Kuyinto ngazo Kuzoxoxwa.
Nail Polish - ukuqinisa ngokumelene lenqwaba
intombazane ngayinye ngokuqinisekile ukubhekana nenkinga ye nail umqulu. Izizathu zalokhu enkingeni yavama: nolaka amathonya ngaphandle, ukucindezeleka kwemizwa, imizwa, ngemvelo okubi, kanye Ukushoda okukhulu kwabantu vitamin D noma calcium. Ngaphezu kwalokho, eliphathisa kwenzeka ngesikhathi ipuleti nail izifo ezihlukahlukene. Lokhu kwenzeka uma kukhona izinkinga kanye indlala yegilo, amathumbu, nezinye izindikimba eziningi. Kukhona izimo eziningi lapho izinzipho waqala ukuba ngivule emva ukusetshenziswa ezivamile imikhiqizo chemical - insipho elwa namagciwane kuphela egeza izimpushana, yokugeza izitsha ketshezi. Kuyacaca ukuthi ngalinye lala izizathu kungenziwa alwa - ukwelashwa, Vitamin ukusetshenziswa. Uma chemistry ilula ngokwanele ukuba ukugqoka amagilavu iraba obukhulu. Kodwa inkathazo edidiyelwe okungcono kakhulu esinakho iwukusebenzisa nail nail ukuqiniswa, okuyinto izinguqulo namuhla abaningi.
Ingabe ukuvenisha usizo?
Ukuze zithinteka nail amapuleti ngokushesha wabuyela esimweni esivamile, kubalulekile ukusebenzisa ekhethekile nail sula.
Ukuze kuqiniswe sipho izinhlobo eziningi izimali - ne amavithamini, amaminerali, okwelapha isitshalo ayo. Nokho, ngokukhetha upende mina, kuyafaneleka ukukhumbula - nezintombi amathiphu ngeke kusize lapha. Omunye kungaba bangaphezi phikisana okuyinto izimali kungaba ngcono. Kodwa lapho uthenga lacquer kudingeke ukuba sincike imibono yabo siqu. Iqiniso lokuthi isakhiwo nail ngesikhathi umuntu ngamunye eyedwa, kanye izizathu okuyizinto izinzipho ethintekile. Ngakho-ke kusho (nail sula ukuqinisa plate), okuyinto usizo ekahle umngane wakho, ngoba awukwazi nhlobo umphumela. Ungakwazi ukuthola uncedo usokhemisi noma kusengaphambili ukuvakashela udokotela-cosmetologist.
Yini firming ukuvenisha?
ukuvenisha ekwelapheni (noma ukuqinisa) - i-ejenti zokwelapha kanye ukukhalima, esebenza bacondze etindzaweni letehlukene. Ngokuyinhloko nail onika nail amapuleti, yokumatisa nabo bonke izakhi ezidingekayo. Kanyekanye kukhona nokuqinisa umzimba nail, kanye nokuvikelwa sithuthukiswe ekulimaleni kusuka ngaphandle. Lokhu yokuwasha, ngemva kwalokho izinzipho embozwe yokuqhuma ezimhlophe, futhi umoya oshisayo, nokuningi. Nail ukuqiniswa kanye nail ukukhula namuhla Ungathenga hhayi kuphela esitolo amakha, kodwa futhi cishe noma yikuphi ekhemisi (okuyinto engcono kakhulu).
Ngokuvamile esitatimendeni isifinyezo likhona, indlela yokusebenzisa kahle ithuluzi, kungakhathaliseki kubalulekile ukugeza kaningi kubalulekile ukusebenzisa izingqimba entsha, indlela izinsuku eziningi kufanele uqhubeke nokwelashwa.
Njengabangaqondakali kungase kuzwakale, kodwa nail has a powder ekhethekile - acrylic. It is kahle esikhulu nail, has a isakhiwo plastic, seyomile ngokushesha, hhayi ukubonakala kuphela okwandisa nail, kodwa ngesikhathi esifanayo kuqinisa. Powder Nail namuhla kungaba ezihlukahlukene shades.
Kungaba ukuthi abeke kanye njengendlela manicure. Ngale ndlela, sokufeza imiphumela ezimbili - izinzipho sigqoka futhi enhle, futhi kanye nalo - Uyozaphula lula kakhulu. Lokhu samuntu kuyinto amantombazane ekahle abaphethwe yokuthi banayo mncane nail amapuleti. Layer, okuyinto kudala powder acrylic ukuba izinzipho, kulesi simo, ingabe ukuqinisekisa ukuthi nail ngaphansi ngeke ziqhume, bayoqhubeka bekhula, ngesikhathi esifanayo iyavuleka izakhi eziqukethwe powder. Kungasetjenziswa kokubili salon kanye ekhaya bebodwa.
Ukwakheka eqinisa varnishes
Nail oluqinisayo kuhlanganisa izingxenye ezilandelayo: ibaluleke kakhulu ekukhuleni amavithamini efanele A, E, C, insimbi, yi-keratin, amaphrotheni, izithelo acid nokuningi. Ngokuvamile nail esobala ngokuphelele.
Lapho usebenzisa it ngaphezu kwalokho inikeza izinzipho ukukhazimula bushelelezi enempilo. Nokho, namuhla ungathola matte ukuvenisha shades ehlukahlukene. Ukulimala izinzipho, kubukeka njenge-evamile, esetshenziselwa manicure. Ungahlangana iqoqo sula - liqukethe varnishes eqinisa hhayi kuphela, kodwa futhi nezinye Izinsiza ezisiza anakekele izinzipho zakho. Ngokusho uhlobo kwabo ukuvenisha, futhi, zihlukaniswe ngezigaba. Okokuqala nje kuyisisekelo-fixer, nsuku ukunciphisa, i hardener ehlangene, nail conditioner, firming noma ekuvuseleleni.
Umehluko ngempela. Ngokwesibonelo, i-base-fixer sisetshenziswa ngu varnishes ezivamile, nail ukuvikela ethonyeni elibi kusuka ngaphandle. A isizinda ngumbuyiseli regenerates nail amapuleti. fixer Comprehensive esetshenziswa ezimweni ezinzima lapho adingekayo ukunqoba lesikhumba nail. Le kit kuhlanganisa sula air conditioning - Iqinisa eyenzelwe ngezipikili esithambile futhi bendable, impatho uqokwa nje udokotela, ukuzisebenzisa uma bebona kunesidingo siqu akuvunyelwe nakancane. Umuthi kuhloswe hhayi kuphela ukuqinisa, kodwa futhi ku hydration, ukuqedwa fragility, ukukhula ingqondo. Can sikubiza engcono nail sula ukuzihlakulela? Izibuyekezo wobulili fair ziyancipha komunye - ngalinye ladies kuyoba okungcono firming lacquer, njengamanje zidinga kuphela izinzipho zakhe. Nokho, kukhona labo brand ukuthi emhlabeni neyaziwayo Ngokwesibonelo, ezinengilazi lemikhiqizo ezifana "Clever koqweqwe lwawo», Trind, Orly noSally Hansen.
Umugqa Orly (abesifazane baziswa ukuqoqwa upende nge Baked amavithamini) ayikalitholi analogue. amantombazane Russian uthanda "Smart koqweqwe lwawo." Ngokombono abathengi abaningi lamathuluzi best for umkhiqizo ukunakekelwa kubhekwa ukuze bathuthukise ne amaprotheni namavithamini - seyomile ngokushesha, esigqokwa isikhathi eside, kodwa futhi kwenza izinzipho zakho enempilo futhi emuhle. I Trind inkampani ejabulisa umugqa fixers Nail yokulungisa Yemvelo ecwebezelayo, matt ngisho umbala. Esikhathini ukubuyekeza, ladies lovely ungakwazi ngokuvamile ukuthola umbono ukuthi ithuluzi awugcini nje ukubuyisela izinzipho, kodwa futhi kunikeza ithuba lokuphila okusha kubo ngemva gel eziningi Ukwakha-up. Kodwa izindlela ukuqinisa izinzipho Sally Hansen ngo ukubuyekeza, ngokuvamile ukuvela njengenhlangano isizinda ekahle, okungadingi iyangena ipuleti nail kungekho zombala. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi ukusetshenziswa okuhlangene lacquer, Ekupholiseni kanye namafutha izikhathi eziningana ukwandisa umphumela nezinqubo eqhubekayo futhi, yebo, ukunciphisa isikhathi sokwelashwa.
Indlela yokufaka isicelo nail sula?
varnishes Ukuqinisa isicelo ngokuhlukile kancane kunokujwayelekile. Okokuqala, kubalulekile ukuba alungiselele izipikili. Izandla kuthiwa kahle wageza ngensipho namanzi, futhi ngemva iphele phezu ukhilimu isikhumba sisetshenziswa. ukunakekelwa ngokukhethekile kufanele niqaphele ukuba uwuhlikihle ukhilimu ukunyakaza emhlabeni nail ukukhulisa ukuthambisa futhi uthuthukise cuticle. Ngemva kwalokho siye isicelo ukuvenisha. Sebenzisa ibhulashi ku tonic nail, ngokulinganayo usabalalisa upende kanye ubude balo lonke.
Ngemva elingenamikhono yokuqala kufanele ulinde uze seyomile. Ngaphezu kwalokho ngokunakekela kancane hhayi ukusebenzisa ungqimba yesibili. ukusetshenziswa omningi lacquer akudingekile - izingqimba kumele ukujiya ophansi. Uma ngokuhamba kwesikhathi, kwezinye izindawo ukupenda uyaxebuka, ungavele uthinte lezi voids. Kakhulu engathandeki firming ukugeza ketshezi nail sula ukukususa, njengoba futhi kubangela umonakalo othile nezinzipho. Penda izinzipho zakho bengaphumuli kuwufanele sonke isikhathi ukuthi is ebalulwe imiyalelo - ngokuvamile le nkathi akuyona kwezinsuku ezingu-30.
Ukulungiswa Proper izinzipho, extension esebenzisa amasu ahlukene
Veil (manicure): indlela yokukwenza design
"Laferobion" (ikhandlela): yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa